Eagle Bay House-Igumbi lasekwindla (amawele) - I-Airbnb
Eagle Bay House-Igumbi lasekwindla (amawele)
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguOlida
Ibekwe kwindawo entle yoKhozi phakathi kweJarrah kunye nehlathi laseMarri le yindawo yokubalekela enokubonwa kuyo yonke ibheyi. Jonga ukuphuma kwelanga okuhle ukuze uqale usuku lwakho. Ukufakwa komgangatho kuyo yonke indawo kunye negumbi lokuhlambela elilingana nelitye labucala. Igumbi eliqhelekileyo lokuhlala kunye nokubukela iTV. Jonga intlango yeehektare ezi-5, uziva ngathi usisigidi seekhilomitha kude ngalo lonke ixesha unxweme oluzolileyo lwe-Eagle Bay lukubiza ukuba udiphe umgama nje omfutshane.
I-Dunsborough yi-5mins nje ezantsi kwendlela kunye ne-Wise Wineries ethandekayo, iLoti engama-80 kunye ne-Eagle Bay Brewery zonke ngaphakathi kohambo olufutshane lwesidlo esimnandi kunye / okanye ukuzifica kwezinye zewayini ezintle ezinikezelwayo. Isidlo sakusasa nje esilula sibandakanya ukutya okuziinkozo, ithowusti, iti kunye nekofu ukukunceda ukuba usendleleni yokujonga ngaphandle.
Imi eEagle Bay kwincam yeCape Naturaliste kukho izibonelelo ezimangalisayo. Imozulu iyalawuleka njengoko singqongwe lulwandle kumacala amathathu kwaye ke ngoko kudla ngokuba shushu kakhulu ngeenyanga zasebusika kwaye kuphole kakhulu kwiinyanga zasehlotyeni kusoloko kukho impepho yokupholisa phantsi kweveranda enomthunzi. Ngelixa ukhazimle kukukhanya kwelanga okuhle kuhlala kuhlawula ukugquma nokuzikhusela elangeni.
Iziza eziphambili phakathi kommandla we-Cape Naturaliste ziquka i-Light House, i-Cape to Cape walk trail, i-Leeuwin-Naturaliste National Park, i-Whale spotting (ukusuka kwiveranda yakho yabucala) okanye ukujonga ngokusondeleyo okanye ukuqubha kunxweme olumangalisayo lwase-Eagle Bay, e-Point Piquet. , iMeelup kunye neCastle Rock. Iilwandle zokusefa entshona Koloni “Elinye icala leNyanga”, ‘Ii-Windmills” kwaye ngokuqinisekileyo “iiBhere ezintathu”. Indawo yokutyela yeWise Wineries, iLot 80 kunye neEagle Bay Brewery kunye nokunye okuninzi. Ukukhwela iMountain Biking kubetha umzantsi-ntshona ngesivunguvungu kwaye kukho iingoma ezininzi kunye nekhosi entsha kwiinduli ezisecaleni kweCape Naturaliste Rd.
Umbuki zindwendwe ngu- Olida
Sijonge ukusebenza ngokuzolileyo nabucala sivumela undwendwe ukuba lukonwabele ukuhlala kwalo lungaphazanyiswa. Sihlala sonwabile ukubulisa kunye nokuhamba kakuhle kwaye sifumaneke ukuze sixoxe ngeendawo ezininzi zabakhenkethi ezinokundwendwelwa.
Sijonge ukusebenza ngokuzolileyo nabucala sivumela undwendwe ukuba lukonwabele ukuhlala kwalo lungaphazanyiswa. Sihlala sonwabile ukubulisa kunye nokuhamba kakuhle kwaye sifumaneke…